अजम्बरी कमरेड पशुपती चौंलागाई प्रति श्रद्धासुमन - Edolakha
अजम्बरी कमरेड पशुपती चौंलागाई प्रति श्रद्धासुमन
4 months ago/Sunday, May 23rd, 2021
पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि सुनसान देखिन्छ । एम्वुलेन्स र सुरक्षा सवारी साधन वाहेकका अन्य सवारी साधन फाट्ट फुट्ट मात्र भेट्न सकिन्छ । एम्बुलेन्सको साइरनले आङै सिरिङ्ग वनाउ“छ । रातको समय इटहरीवाट विराटनगरतिर जाँदा जति हिड्यो उति सुनसान र सन्नाटापूर्ण वातावरण भेटिन्छ । गाडीभित्र भाई र म मात्र छौं । हामी दाजुभाइ गाडीको संगितसँगै वाह्य वातावरणवाट तर्किएर गाडीभित्र कै वातावरणमा अनुकुलित हुने प्रयत्नमा छौं । व्यस्त वजार क्षेत्र भएर पनि सबै पसलहरु वन्द देखिन्छ । वन्द भएका केही सटरमा ‘रेड जोन’ भनेर लेखिएका स्टीकर टाँसिएका रहेछन् । लाग्छ भिषण लडाई झेलिरहेको युद्ध क्षेत्रमा गैर सैनिक नागरिकको रुपमा हामी मात्र त्यस सडकमा हिडिरहेका छौं ।
करिव रातको ११ वजेको हुदो हो, हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्यौं । पुरानो चिनजान भएको हिसावले मात्र त्यो होटल खोलिएको थियो । करिव ४०० क्षमताको होटलमा हामी दुई जना वाहेक वाहिर एक जना पाले दाई मात्र हुनुहुन्थ्यो । हामी फ्रेस भएर वेडमा मात्र के पल्टिएका थियौं । फोनमा मिसकल देखिए । मैले सर्वप्रथम घरमा फोन गरे, ठूलो रुवावासी रहेछ । त्यो अत्यास लाग्दो रुवाबासीकाविच सुनेको खवरले मलाई एक्कासी आकासमा उडाए जस्तो झड्का महशुस भयो । मानव शुन्यतामा एक्लै हराएझै अनुभूति भयो । मसँग धेरै शव्द थिएन प्रतिकृया दिने, आवाज थिएन अनुभूति ओकल्ने, शक्ति थिएन । पृथ्वीमा उभिने र कोही साथी थिएन अंकमाल गरेर पिडा साट्ने । एक जना असल अभिभावक गुमाएको महशुस भयो मलाई । अर्कै पलङमा रहेको भाई लक्ष्मण खड्कालाई पनि उस्तै अवस्थामा देखें, उसँग छट्पटी थियो, उदासता थियो, ऊ अवाक थियो, एकोहोरो हेरिमात्र रहन्थ्यो । सायद उसले पनि वोल्ने शव्द पाएको थिएन ।
एकछिन सबैतिर फोन घुमायौं हामीले । समाचार असत्य होस् भन्ने चाहान्थ्यौं तर प्राकृतिक सत्यतालाई हाम्रा कृतिम पहल कदमीले कसरी वदल्न सक्थ्यो र ? पशुपति दाईले हामीलाई सदाको लागि छोडिसक्नु भएको थियो । अपत्यारिलो सत्यलाई पत्याउनु पर्ने र अपुरणीय क्षतिलाई स्वीकार्नु पर्ने हामीलाई वाध्यता थियो । त्यसका लागि सायद पर्याप्त शक्ति मसँग थिएन । जसले गर्दा छट्पटी र कम्पन महशुस गरिरहेको थिए । ताकी मन तातो थियो तर ओछ्यानमा छु तैपनि खुईय गर्न मन लाग्छ । के गरौं, कसो गरौं हुन्छ । अशान्तिपूर्ण मनको आँधीमय भूमरीमा फसेजस्तो महशुस हुन्छ ।
समाचार असत्य होस् भन्ने चाहान्थ्यौं तर प्राकृतिक सत्यतालाई हाम्रा कृतिम पहल कदमीले कसरी वदल्न सक्थ्यो र ? पशुपति दाईले हामीलाई सदाको लागि छोडिसक्नु भएको थियो । अपत्यारिलो सत्यलाई पत्याउनु पर्ने र अपुरणीय क्षतिलाई स्वीकार्नु पर्ने हामीलाई वाध्यता थियो । त्यसका लागि सायद पर्याप्त शक्ति मसँग थिएन । जसले गर्दा छट्पटी र कम्पन महशुस गरिरहेको थिए । त्यसलाई स्वीकार्नुको मसग अर्को विकल्प थिएन । हामी पशुपतिमा पुग्दा झमझमपानी परिरहेको थियो । मन्दिर वरपर खोलाको वगरमा लासहरु जलिरहेका थिए । मानिसहरु आफन्तको वियोगमा आँशु पिउदै, छट्पटिदै गरेको कारुणिक दृष्य देखिन्थ्यो । मेरो मन भक्कानिन्छ, श्रद्धाका आँशु झरिरहन्छ, मैले सिन्धुलीदेखि ल्याएको उहाप्रति समर्पित दुइ थुँगाफूल त्यही वगिरहेको वागमतीमा समर्पण गरें । फूलसगैँ उहाँसँगका सहकार्यका रहरहरु पनि त्यहीं विसाएर घर फर्किए ।
भित्ताको घडीले रातको १२ः३० वजेको जनाउ दिइसकेको थियो । मैले भाइलाई भने,“अव सुतौं ।” एक गिलास चिसो पानी पिएर वत्ती निभाए अनि ओछ्यानमा पल्टिए । यता फर्कियो, उता फर्कियो निन्द्रा लाग्दैन । मध्यरात, अन्धकार कोठा, आँखा चिम्लिदा पशुपती दाइको हँसिलो मुहार नाँचीरहन्छ मानस्पटलमा । मलाई लाग्यो, मररे पनि वाँचीरहने भनेको यही होला सायद । उहाँ हुनुहुन्न अव तर उहाँ नै चाहिएको छ मलाई । उहाँ वोल्नुहुन्न अव तर उहाँसँगै वात मार्नुछ मलाई । मैले सम्झे म भन्दा अझ धेरै छट्पटीमा त भाउजू सुनिता, भाई सुमन अनि वहिनीहरु होलान्, सँगै उहाँका सहोदर भाइहरु कुमार, हेमन्त र सिंगो परिवारजन । यो खवर थाहा पाएका कुनै पनि दोलखालीको आँखा ओभानो छैन होला । सबैको आँखा अगाडि उहाँकै सुन्दर तस्विर नाँची रहेको होला ।
यता पल्टियो उता पल्टियो निदाउनै सकिएन । मोवाइलमा समय हेरे विहानको ३ः१५ भएछ । वत्तिवाले अनि पानी तताएर एक गिलास पानी पिएं । अव ३ः४० भएको थियो । मैले भाइलाई उठाए र त्यहाँको काम छोडेर विराटनगरबाट काठमाण्डौं हिड्ने निधो गरें । हामी विहान ४ः३० वजे विराटनगर छोडेर काठमाण्डौं लाग्यौं । विश्व महामारीको रुपमा मडारिरहेको दोस्रो कोरोना लहर विरुद्ध जुध्न सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण वाटो सुनसान थियो । खुल्ला राजमार्गमा हाम्रो गाडी जति वेगले गुडिरहेको थियो, त्यो भन्दा कयौं गुणा वढी उडिरहेको थियो मेरो मन । वाटोभरि उहाँसँगका संस्मरणात्मक झल्कोले छोपी रह्यो । उडाई रह्यो ।
कमरेड पशुपति चौंलागाई सरल जीवनशैली र उच्च विचारले भरिपूर्ण कम्युनिष्ट निष्ठाका जीवित प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो विचार र नेतृत्वप्रति प्रतिवद्ध तर कार्यशैलीमा लचकता र समाजिक काममा उदारता उहाँका विषेशता थिए । जिल्लाको विकासका योजना र व्यक्ति–व्यक्तिको अप्ठ्यारोमा आफ्नो भूमिकालाई कहिल्यै पनि अल्छी गर्नु भएन । आन्दोलनका हिसावले अहिलेको नेकपा एमाले धारको दोलखामा जग वसाल्ने देखि आजको अस्तित्व कायम गर्ने मियो नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो । हुन त त्यसो भन्दाखेरी केही साथीहरुप्रति क्षमाप्रार्थी छु,जसले एमाले भनेको नै म र म भनेको नै एमाले बुझ्नु भएको छ । तिनै पशुपति चौलागाईहरु कै राजनीति स्कुलभित्र प्रतिपक्षी सिपाही जसरी जन्मिएर हुर्कदै कहिले एकता र कहिले संघर्षको यात्रावाट आएको व्यक्ति भएकोले मैले भन्नै पर्छ, हामीले जानेको र मानेको दोलखाली एमाले धारको प्रमुख नेता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले आजको दिनमा हामीलाई भन्दा पनि एमालेको परिवारमा वढी चिन्ता छ । बढी छट्पटी छ ।
जसरी भिमबहादुर तामाङको वियोगमा काँग्रेस परिवार आँशुमा डुवेको थियो र रित बहादुरको विछोडमा माओवादी परिवार आक्रान्तपूर्ण शोकमा डुवेको थियो । जे होस् दोलखाली जीवित नेताहरुमा उहाँ एक नम्बरमै हुनुहुन्थ्यो । निष्ठा, आदर्श र विश्वासका हिसावले हामी दोलखालीले राजनैतिक संस्कार, वर्गीय निष्ठा र मानवीय उच्च चेतनाका शिखर प्रतिमूर्तिलाई गुमायौं । आज हाम्रो प्रतिवद्धता भनेको दाइ पशुपति चौलागाईसँगै राजनैतिक संस्कार, संस्कृति, निष्ठा र आदर्श नगुमोस् भन्ने हो । जति गाडीका पाङग्रा घुम्दै थिए त्यो भन्दा वढी मेरो मन घुमिरहेको थियो र सम्झनाका तरेलीमा उहाँसँगका संस्मरणहरु मात्र नाचिरहेका थिए । सिन्धुली गढीसम्म आइपुग्दा विहानको ९ः३० वजेको रहेछ । हामी कहीं रोकिएका थिएनौ, जसरी विराटनगरदेखि सिन्धुलीसम्मको हाम्रो यात्रा एकोहोरो थियो, त्यसरी नै यात्रा अवधिभर मनमा उहाँ संगका सम्झना मात्र थियो । हामी विचका कुराकानी पनि उहाँका वारेमा मात्र थिए ।
कमरेड पशुपति चौंलागाई सरल जीवनशैली र उच्च विचारले भरिपूर्ण कम्युनिष्ट निष्ठाका जीवित प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो विचार र नेतृत्वप्रति प्रतिवद्ध तर कार्यशैलीमा लचकता र समाजिक काममा उदारता उहाँका विषेशता थिए । आन्दोलनका हिसावले अहिलेको नेकपा एमाले धारको दोलखामा जग वसाल्ने देखि आजको अस्तित्व कायम गर्ने मियो नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो । जे होस् दोलखाली जीवित नेताहरुमा उहाँ एक नम्बरमै हुनुहुन्थ्यो । निष्ठा, आदर्श र विश्वासका हिसावले हामी दोलखालीले राजनैतिक संस्कार, वर्गीय निष्ठा र मानवीय उच्च चेतनाका शिखर प्रतिमूर्तिलाई गुमायौं । आज हाम्रो प्रतिवद्धता भनेको दाइ पशुपति चौलागाईसँगै राजनैतिक संस्कार, संस्कृति, निष्ठा र आदर्श नगुमोस् भन्ने हो ।
हामी केही समयको आरमपछि सिन्धुलीलाई छोडेर अघि वढ्यौं । दाइ रितबहादुरसंगै आएर हामीलाई कम्यनिष्ट शिक्षा सिकाउने राजनैतिक गुरु पशुपति दाइप्रति श्रद्धाको शिर झनै निहुरिरहन्छ । चुनावी अभियानसँगै प्रदेश सभाको नियमित सहकार्यको यात्रा सम्झँदा कमरेडको सम्झनाले छातीझनै भक्कानिन्छ । आखिर जे नहुनु पर्ने हो त्यो त भई नै सकेको थियो । तर पनि उहाँको पार्थीव शरीरमा दुइ थुंगा फूल चढाउने र अन्तिम श्रद्धासुमन प्रकट गर्ने इच्छा शक्तिका कारण हाम्रो यात्रा वेगवान थियो । भकुण्डेवेसी कटेपछि मैले विद्यार्थी नेता कल्याण दाहाललाई फोन गरें । उहाँले १०–१५ मिनेटसम्म आइपुग्दा भ्याउनु हुन्छ भन्नुभयो । हामीले गाडीको स्पिडलाइ अलि वढायौं । मन जतिसुकै उडेपनि गाडीको क्षमताको आफ्नो सीमा थियो । त्यसलाई स्वीकार्नुको मसग अर्को विकल्प थिएन ।
हामी पशुपतिमा पुग्दा झमझमपानी परिरहेको थियो । मन्दिर वरपर खोलाको वगरमा लासहरु जलिरहेका थिए । मानिसहरु आफन्तको वियोगमा आँशु पिउदै, छट्पटिदै गरेको कारुणिक दृष्य देखिन्थ्यो । कोरोनावाट वच्न मास्क लगाएर सामाजिक दुरी कायम गर्ने प्रयत्न गरेतापनि असफल भए जस्तो देखिन्थ्यो । सायद उहाँहरुको भावात्मक आवेगका सामू कोरोनाको कहर र जीवनको रहर पनि फिक्का फिक्का भए जस्तो लाग्थ्यो । हामीले वुझ्यौं दाईको अन्तिम संस्कार कहा“ हु“दै छ भनेर तर सकिएको थाहा पायौं । सबै जना फर्किसक्नु भएछ । वागमती निरन्तर वगिरहेको छ । पशुपतिको गजुर सधाझैं अटल र चमक नै देखिन्छ । तर हाम्रो नेताको पार्थीव शरीर सदाको लागि त्यही नै अलप भएको छ । मेरो मन भक्कानिन्छ, श्रद्धाका आँशु झरिरहन्छ, मैले सिन्धुलीदेखि ल्याएको उहाप्रति समर्पित दुइ थुँगाफूल त्यही वगिरहेको वागमतीमा समर्पण गरें । फूलसगैँ उहाँसँगका सहकार्यका रहरहरु पनि त्यहीं विसाएर घर फर्किए ।
वास्तवमा पञ्चायती निरङ्कुशतासँग लडेका ती योद्धा, गरिवी, अभाव र सामाजिक बिसंगतिसग कहिल्यै नझुकेका ती मानव, आन्तरिक होस वा वाह्य सबै खाले प्रतिगमनसँग विजय भएका ती नेता अदृश्य भाईरससँग पराजित हुन पुगे । प्रकृतिको स्वाभाविक नियमानुसार भौतिक रुपले मृत्युवरण गरेर पनि सामाजिक निष्ठा र मूल्य मान्यताको अजम्बरी वनिरहेने ती अजम्बरी कमरेडप्रति श्रद्धासुमन ∕ अस्तु ।
(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता एवँ बागमती प्रदेश सभाका सांसद हुन्)
VIEWS: 7625 पटक हेरीएको